တောငျပံကစားသမားလေးဒနျနီရယျဂြိမျးဈဟာ မနျယူမှာ မျောရငျဟိုလကျအောကျ ကစားခဲ့ဖူးသူတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဗုဒ်ဓဟူးညပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျမှာတော့ အဲဒီပျေါတူဂီသားနညျးပွနဲ့ နဖူးတိုကျ ဒူးတိုကျတော့မဟုတျဘဲ နဖူးနဲ့ ဒူးတိုကျ အနီးကပျတှလေို့ကျရပါတယျ။
မနျယူက အထုတျခံရပွီးနောကျပိုငျး ပွိုငျဘကျနညျးပွတဈယောကျအနနေဲ့ အိုးလျထရကျဖို့ဒျကို ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ပွနျရောကျလာတဲ့မျောရငျဟိုဟာ ကှငျးဘေးက နညျးစနဈဧရိယာထဲမှာ သူ့စပါးကစားသမားတှကေို ညှနျကွားနခြေိနျဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာ စပါးကှငျးလယျလူဟယျရီဝငျ့ချက မနျယူတောငျပံကစားသမားဒနျနီရယျဂြိမျးဈကို လြှောထိုးဖကျြထုတျမှုပွုလုပျလိုကျပါတယျ။ အစတညျးက အရှိနျနဲ့ဝငျလာတာဆိုတော့ ဒနျနီရယျဂြိမျးဈလညျး မထိနျးနိုငျတော့ဘဲ သူ့ခေါငျးနဲ့ မျောရငျဟိုရဲ့ဒူးကို သှားဆောငျ့မိပါတော့တယျ။
Daniel James just tookaknee to the head. Jose Mourinho's knee. pic.twitter.com/pXhKzDAdlr
— Matthew Reichbach (@fbihop) December 4, 2019
အဲဒါကွောငျ့ ဒနျနီရယျဂြိမျးဈဟာ မွကျခငျးအပွငျဘကျကို လိမျ့ကသြှားခဲ့သလို မျောရငျဟိုလညျး နာကငျြသှားပုံရပွီး ခဏတော့ ထော့နငျးထော့နငျး ဖွဈသှားပါတယျ။ ဒနျနီရယျဂြိမျးဈလညျး ကှငျးထဲပွနျမဝငျခငျ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရတာပါ။ ဒနျနီရယျဂြိမျးဈက အရှိနျနဲ့ဝငျဆောငျ့တာဆိုတော့ ဒီလောကျနဲ့ပွီးသှားတာကပဲ မျောရငျဟိုအတှကျ ကံကောငျးခဲ့တာပါ။ နို့မိုဆိုရငျ မျောရငျဟိုဟာ ပှဲကွီးကွပျနိုငျမှာမဟုတျဘဲ ဆေးရုံရောကျသှားနိုငျပါတယျ။
အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်ကြောင့် ဒဏ်ရာရမလိုဖြစ်သွားတဲ့ မော်ရင်ဟို
တောင်ပံကစားသမားလေးဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်ဟာ မန်ယူမှာ မော်ရင်ဟိုလက်အောက် ကစားခဲ့ဖူးသူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးညပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာတော့ အဲဒီပေါ်တူဂီသားနည်းပြနဲ့ နဖူးတိုက် ဒူးတိုက်တော့မဟုတ်ဘဲ နဖူးနဲ့ ဒူးတိုက် အနီးကပ်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
မန်ယူက အထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း ပြိုင်ဘက်နည်းပြတစ်ယောက်အနေနဲ့ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပြန်ရောက်လာတဲ့မော်ရင်ဟိုဟာ ကွင်းဘေးက နည်းစနစ်ဧရိယာထဲမှာ သူ့စပါးကစားသမားတွေကို ညွန်ကြားနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စပါးကွင်းလယ်လူဟယ်ရီဝင့်ခ်က မန်ယူတောင်ပံကစားသမားဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်ကို လျှောထိုးဖျက်ထုတ်မှုပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ အစတည်းက အရှိန်နဲ့ဝင်လာတာဆိုတော့ ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်လည်း မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ သူ့ခေါင်းနဲ့ မော်ရင်ဟိုရဲ့ဒူးကို သွားဆောင့်မိပါတော့တယ်။
အဲဒါကြောင့် ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်ဟာ မြက်ခင်းအပြင်ဘက်ကို လိမ့်ကျသွားခဲ့သလို မော်ရင်ဟိုလည်း နာကျင်သွားပုံရပြီး ခဏတော့ ထော့နင်းထော့နင်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်လည်း ကွင်းထဲပြန်မ၀င်ခင် ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရတာပါ။ ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်က အရှိန်နဲ့ဝင်ဆောင့်တာဆိုတော့ ဒီလောက်နဲ့ပြီးသွားတာကပဲ မော်ရင်ဟိုအတွက် ကံကောင်းခဲ့တာပါ။ နို့မိုဆိုရင် မော်ရင်ဟိုဟာ ပွဲကြီးကြပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲ ဆေးရုံရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
စပါးရောကျအမှတျတရအဖွဈ ၃၈ ခုမွောကျ မျောရငျဟိုတကျတူးထိုးလိုကျတဲ့ မျောကွီးရဲ့စူပါဖနျ